I-Semalt Expert: I-Wordpress Theme Types - Iingcebiso ezifanelekileyo
Ukuthatha isigqibo kwiSihloko se-WordPress yinto efunekayo ukuba umntu enze iblogi. Enye yezinto eziphambili ze-Wordpress kukuba unokwenza isiseko esekelwe kwaye wenze ukuba sibukeke ngendlela othanda ngayo kwaye ufisa ngokufaka i-plugin ye-WordPress. Umxholo uya kushiya umxholo wakho ofanayo kodwa utshintshe ukubukeka kwewebhusayithi kunye nendlela evezwe ngayo. Uhlobo lwesigqibo owukhethayo lunokwenza ukuba umxholo wakho ubonakale uhluke ngokupheleleyo, into oyenayo ngokukodwa.
U-Ivan Konovalov, oyingcali ehamba phambili iSemalt , uchaza ukuba iifayile ze-Wordpress ziza kwiintlobo ezininzi ezibandakanya:
Iingqungquthela ezithengiweyo okanye i-premium
Lezi zihloko ezizithengayo kumthengisi we-intanethi. Uya kugqiba ukuzithenga ngemali yexesha elilodwa okanye ukhethe ukuhlawula rhoqo ngonyaka. Ngokuxhomekeke kumthengisi, unokufumana ii-video tutorials ezichaza indlela yokuzisebenzisa.
Iingqungquthela zeeNyanga ziza neenzuzo ezininzi kuquka:
Ukulungiswa kunye nokusebenza okuphezulu
Ukubonelela ngenkxaso epheleleyo
Basebenzisa iteknoloji yakutshanje kunye nemigangatho ephezulu yewebhu
Ziza kunye nezinketho ezininzi kunye nezixhobo zokuzikhethela ezikuvumela ukuguqula ukusebenza kwesiza sakho. Ezinye zeenketho ziquka ukutshintsha umbala nokutshintsha ukufakwa kwesayithi lakho..Ziyona nto ibhetele kwiblogi epheleleyo.
Kukho amawaka eentlobo zeentetho zamahhala kwi-intanethi. Bakhululekile ukukhuphela, kwaye unako ukuyisebenzisa ngaphandle kwesithintelo. Ungawafumana ngokuvakashela i-Wordpress.org themes directory, kwaye i-100% ekhululekile.
Simahla - Ithetha ukuba uyazifumana ngaphandle kokuhlawula nayiphi na into. Iingqungquthela zamahhala zihluke kwi-freemium kuba iingqikithi zamahhala zizalisekile zivela kwizinto ezincinci ukuya kwiimpawu eziqhayisayo.
I-Freemium - Ezi ngqungquthela zikhishwa kunye nemisebenzi emiselweyo yokuhlola xa ekugqibeleni ukuba uyabathanda, uya kucelwa ukuba uthenge inguqulo epheleleyo. Ngako oko, abayikhululekile kuba kuya kufuneka ukuba uhlawule ngawo ngexesha.
Baphinde bakhulunywe njengemixholo yoqulunqo. Oku kungenxa yokuba iindimu sele zilungisiwe, kodwa kufuneka ziphuhliswe zibe yinto engcono.
Ezi ngqungquthela zilungelelaniswa kwinqununu encinane. Ezi ziquka izihloko ezinjengamahlunu, amathambo kunye neengcambu apho abaphuhlisi bazuza kulowo mnye bazama ukuphuhlisa ukuba zizinzile kwaye zibe nezoqoqosho. Zijolise ekunikezeni abasebenzisi ngolwazi ukwenza ngokwezifiso iikhowudi zomxholo, kwaye ziyacetyiswa kulabo bantu bafuna ukuphuhlisa iingqungquthela zabo.
Yonke into iyingqayizivele, kwaye yonke imiselwe ukuhambelana neemfuno zomntu ngamnye. Yenza uphando malunga neempawu ngamnye ngaphambi kokuthatha isigqibo malunga nomxholo oyisebenzisayo kwiblogi yakho Source .